Ngwuputa ego na Bitcoins na igwe ojii - Nweta ego ego | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Gaton | | Ego, software, Technology
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na tinye ego na cryptocurrencies na ị chọghị imefu ego na zụta Bitcoins, Ethereum ma ọ bụ ego ndị ọzọ ozugbo, mgbe ahụ nhọrọ nke nwere ike ịmasị nke ukwuu bụ igwupụta. Na Ngwuputa cryptocurrency Ọ bụ usoro a tụkọtara ego nke azụmahịa na-akwado ya na blockchain; Mana iji ghọtakwuo nke ọma n'ụzọ dị mfe ihe ọ mejupụtara, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ usoro nke kọmpụta na-ewepụta usoro nke nghazi ihe na nloghachi na-enweta ịkwụ ụgwọ na cryptocurrencies. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ otu esi egwupụta mkpụrụ ego n'ụzọ bara uru yana site na igwe ojii, wee gụọ isiokwu a.
1 Ngwuputa Cryptocurrency, ntakịrị akụkọ ihe mere eme
2 Mininggwé ojii na-egwupụta
3 HashFlare, bitcoins m na igwe ojii
4 Kedu otu esi egwuputa cryptocurrencies na Hashflare?
Ngwuputa Cryptocurrency, ntakịrị akụkọ ihe mere eme
Ọtụtụ afọ gara aga ọ ga-ekwe omume m na-egwupụta Bitcoins ma ọ bụ cryptocurrencies ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe site n'ụlọ na itinye ego pere mpe na akụrụngwa. Kọmputa ọ bụla nwere ike igwu mkpụrụ ego n'ụzọ bara uru ma yabụ ụfọdụ ndị kpebiri itinye ego na igwe na-egwupụta m n'ụlọ site n'ụzọ ka ukwuu onye na-amu amu. Ugbu a nke a agaghịzi ekwe omume, ọdịdị nke akụrụngwa akụrụngwa maka akụrụngwa nke mkpụrụ ego ọnụ na nsogbu na-arịwanye elu nke algorithm nke Ngwuputa na-eme ka ọ ghara ịba uru na nke a taa - ma ọ dịkarịa ala maka ego ndị a na-ahụkarị dị ka Bitcoin, Ether, ... - nakwa na ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-achịkwa ahịa ahụ. nnukwu ego na ọrụ a.
Ọ bụghị naanị na anyị nwere ihe ịchọpụta ego nke ngwaike, anyị nwekwara adịghị ike ndị ọzọ dịka:
El enwekwu nsogbu: ihe isi ike nke Ngwuputa Bitcoins na-abawanye kwa ọnwa site na ọnwa, n'ihi ya, ọ na-adịwanye mkpa inwekwu ike Mgbakọ iji nwee ike igwu Bitcoins n'ụzọ bara uru.
El ụgwọ ume: Mkpụrụ ego bụ usoro nke na-ere nnukwu ọkụ eletrik, ya mere, ọ bara uru karịa na mba ndị ahụ nwere ọkụ eletrik bara uru dịka China, Iceland, wdg.
La gburugburu ebe obibi okpomọkụ: processors emit nnukwu ego nke okpomọkụ mgbe Ngwuputa na anyị kwesịrị igbasa na okpomọkụ; ya mere igwuputa ihe na mba nwere ihu igwe oyi na-ebelata ego.
Maka ebumnuche ndị a - na ndị ọzọ - taa a na-eme ọtụtụ ntụgharị cryptocurrency na mba ndị dịka China, Iceland, Finland, wdg.
Dị ka anyị kwurula, Ngwuputa cryptocurrencies site na ulo abaghi ​​uru ugbu a. Ọfọn, n'ezie, ọ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụhaala na anyị na-achọ cryptocurrencies ndị ahụ emepụtara n'oge na-adịbeghị anya bụ ndị a na-amachaghị na nke ka na-ahapụ ngwuputa site na ngwaike na-esighi ike, mana nke ahụ bụ okwu ọzọ m ga-enye maka edemede ọzọ buru ibu N'okwu a anyị na-ekwu maka ntinye nke isi cryptos na na ugbu a site n'ụlọ agaghị ekwe omume.
N'ihi ya, enweghị m ike ịme ego na-egwupụta Bitcoins ọzọ? Azịza ya bụ ee, ekele maka ihe a maara dị ka igwe ojii o igwe igwe. Echiche bụ na ụlọ ọrụ apụtawo n'oge na-adịbeghị anya na ịtọ ntọala sistemụ nnukwu mkpụrụ ego na mba yana ngwa ọrụ pụrụ iche, na-enweta uru na ụlọ ọrụ ndị a na-enye gị ohere ịnwe ọrụ ha iji nwee nke gị nke ọma. N'ụzọ dị otu a, ịnwere ike ịnwe sistemụ Bitcoins gị na ị ga-akwụ ụgwọ naanị, na-ezere ịnwe akụrụngwa ozugbo.
Ugbu a enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ọrụ ndị a mana ị ga-akpachara anya mgbe ị na-ahọrọ otu ebe ọ bụ na enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị aghụghọ bụ na, na-agbaso atụmatụ pyramid, ghọgburu ego n'aka ndị ahịa ha. Anyị anyị na-akwado Hashflare, nke bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na afọ ole na ole na-egosi na ọ bụ ụlọ ọrụ na nke ị nwere ike ịtụkwasị obi na ihe elu ígwé ojii Ngwuputa uru Site na ahịa.
HashFlare, bitcoins m na igwe ojii
HashFlare bụ a ígwé ojii na-egwupụta usoro nke ahụ na-enye sistemụ ngwuputa akụrụngwa na akụrụngwa arụnyere na Iceland, na-enweta uru dị elu na-enye ekele maka ọnụ ala nke ume na Iceland na ihu igwe oyi ya na-enye ha ohere ịchekwa ọtụtụ ego mgbe a bịara n'ịgbasa okpomọkụ site na akụrụngwa. Ha na-ekwe ka egwuputa nke Bitcoins, Ethereum, Litecoins na Dash ugbu a.
You chọrọ ka m ga-egwupụta Bitcoins?
Pịa Ebe a ka m gwuo Bitcoins
Kedu otu esi egwuputa cryptocurrencies na Hashflare?
Agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya, mkpụrụ ego Hashflare na-egwupụta akụ dị mfe. Naanị ị ga-agbaso usoro ndị a:
1.- Pịa ebe a ma debanye aha na HashFlare
2.- Ozugbo n'ime ị ga- zuta usoro ntinye. N'ebe a, ị nwere algorithms dị iche iche dị iche iche ka m gwuo ma ọ bụ nke ọzọ cryptocurrency. Fọdụ bara uru karịa ndị ọzọ, mana anyị na-akwado gị zụta algorithm SHA-256 na nke m Bitcoins.
3.- Họrọ oke kedu ihe ị chọrọ itinye na dollars. Nwere ike ịnweta site na $ 1,5 ruo ego dị elu nke $ 15.000. N'ebe a, ọ dabere na akụ nke ọ bụla na otu ịchọrọ itinye ego na nsị.
4.- Mee ugwo. Nwere ike ịkwụ ụgwọ na Bitcoins mana ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na-enweghị ogo na cryptocurrencies ị nwekwara ike ime ya ozugbo na usoro ọdịnala ndị ọzọ dịka mbufe akụ ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụrụ n ’iji kredit kaadị, ị ga-akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ ma emechaa site n’igosi koodu etinyere na ụgwọ gị na kaadị ahụ, yabụ ọ nwere ike iwe ụbọchị ole na ole.
Ma ọ bụ ya, i nwere ike ịmalite Ngwuputa Bitcoins na irite ego n'ọnwa n'ọnwa na-enweghị ime ihe ọ bụla ọzọ.
Na nhazi gị HashFlare ị nwere ozi ebe ị nwere ike ịhụ ego a na-enweta kwa ụbọchị, amụma ego ego maka ụbọchị 1, izu 1, ọnwa 1, ọnwa isii na afọ 6 ka ị wee hụ uru ego gị bara.
Ozugbo ị chịkọtara Bitcoins na akaụntụ gị, ị nwere ike:
Na-akpaghị aka reinvest kwuru bitcoins na nzụta nke ike ike na Hashflare ka uto nke itinye ego gị na-agbanwe.
Nyefee ndị a Bitcoins gị obere akpa ebe ị nwere ike ịchekwa ha ma ọ bụ tọghata ha euro ma ọ bụ dollar si kwa n’ebe ahu were ha rue ulo-nba-gi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nsị cryptocurrencies site na igwe ojii bụ usoro dị mfe. N'ihi nyiwe dị ka Hashflare i nwere ike itinye ego site na $ 1,5 ma bido igwuputa ihe n’enweghi nsogbu nsogbu di iche dika izuta ihe oru puru iche, idebe sistemu, tinye ihe ntinye algorithm, ... ihe a nile ka hashflare diri gi Naanị ị ga-ekpebi ego ị ga-arara maka itinye ego gị, zụta ike ngwupụta ya na ọ bụ ya. HashFlare na-ahụ maka ịme uru gị kachasị mma, ịmalite ịrụ ọrụ na ha cheta nke ahụ naanị ị pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ngwuputa nke Cryptocurrency, choputa otu esi eme ego igwe ojii
José Luis Ureña Alexiades dijo
Edemede na-enweghị ọrụ. Nkọwapụta na-adịghị arụpụta, yana n'elu na cryptocurrencies opaque na baasia. Ọ dị mma maka Mafia karịa ndị nwere ibu ọrụ.
Zaghachi Jose Luis Ureña Alexiades
Akụkọ akụrụngwa dijo
Ndewo Jose Luis Ureña Alexiades. Ọ dị m nwute na isiokwu ahụ adịghị gị mma, ọ bụ eziokwu na cryptocurrencies bụ itinye ego dị egwu yana ọ bụ otu a ga - esi were ha (na igwu ihe egwu dị ntakịrị karịa n'ihi na o doro anya na ọ dịkwa). Nke ahụ ee, anyị ekwenyeghị na ọ bụ ahịa maka mafia; O nwere ike ịbụ na e nwere ndị omempụ na-etinye aka na mpaghara ahụ maka aha amaghị aha ọ na-enye, mana enwekwara mpaghara gburugburu ụwa blockcheni nke mejupụtara ndị nkịtị. Blockchain ga - eme ọfụma site na “ntanetị nke ozi” gaa na “ntanetị nke uru” ma ọ bụrụ na ekwenyesiri ike ya, ọ ga - ekwe omume na anyị na - eche ihu mgbanwe dị ka mgbanwe dị ka mbata nke ịntanetị pụtara. Ekele na ekele maka ịgụ anyị
Zaghachi na Akụrụngwa Akụkọ
Gọọmentị na ụlọ akụ chere otu ihe, ụtụ isi na commlọrụ na-agakarị na ha nọ na azụmahịa n'etiti ha Banks na Gọọmentị n'azụ onye ahịa nke ụlọ akụ na-amaghị ma ọ bụ nwee nkọwa ihe kpatara ha ji akwụ ụgwọ ọtụtụ ọrụ na mbufe n'etiti ego. Cryptocurrency bu uzo ozo ma na abawanye ma uwa n’enweghi ike isi na ya puta.
Chika okpala dijo
José kwesịrị ịgụkwu
Zaghachi Omar Valfre
Ya mere, ụlọ ọrụ ndị a, kama ịgwu onwe ha ma baa ọgaranya, ree gị egwupụta ka i wee baa ọgaranya? N'ezie, n'ezie. Nke a dị ka ndị na-ere gị ọmụmụ / akwụkwọ ka ị wee baa ọgaranya itinye ego na ngwaahịa XD
Zaghachi Oscar López
Ha na-egwu ịnyịnya ibu ha otu ọnwa kwa. Ihe na - eme bụ na mgbakwunye na igwuputa ihe ha na - enye gị ịgbazite akụrụngwa ha ka ị nwee ike igwu egwu.
A na m ahụ ya dịka ụzọ isi wee gbanwee ego ha,% maka Ngwuputa na% ọzọ maka mgbazinye akụrụngwa.
Zaghachi Miguel Gaton
Enwere m obi abụọ ụfọdụ banyere ikpo okwu nke na-edobeghị m anya n'isiokwu ahụ. Nwere ike ịza m? Daalụ:
1.- Ike gị ịgbazite, ego ole ka ọ na-ewepụta? You nwere ike ịchọpụta tupu ịzụta ya?
2.- Ọ dị mkpa ịnweta obere akpa ntanetị ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị iji nwee ike ịdọrọ bitcoins gị?
3.- Kedu ihe a na-atụ aro ya, nke na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ nke dị n'ịntanetị?
Ekele na ekele, Antonio
1.- Na panel nke Hashflare n’onwe ya, ọ na - enye gị ohere ịmegharị ihe ị na - ewepụta kwa ụbọchị na ikike nkwekọrịta ọ bụla.
2. - Ee, ịkwesịrị ịnwe obere akpa bitcoin iji wepụ ihe a na-eme. Ọ bụrụ n’inweta Ether ị ga-achọ obere akpa Ether.
3. - Na nchekwa larịị, offline bụ ukwuu odi mfe ma ọ bụkwa ihe mgbagwoju anya jikwaa. Na njedebe, m ga-ekpebi otu ma ọ bụ nke ọzọ dabere na ntinye ego gị. Ọ bụrụ na ị ga - eme ego dị ala, echere m na nke anụ ahụ agaghị aba uru, ọ bụrụ na ị ga - etinye ego kpamkpam mgbe ee.
Daalụ maka ịzaghachi m Miguel.
Ndewo, naanị m gụrụ akụkọ gị gbasara igwupụta igwe ojii na igwe ojii na HashFlare ma zụta algorithm SHA-256 na Bitcoins m ruo mgbe m nwere ihe doro anya, ihe m na-edoghị anya bụ $ 1,50 nke ahụ bụ ihe m nwere nke na-akwụ kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa afo ma oburu na m tinye ya. Daalụ nke ukwuu jose
Zaghachi Jose Gonzalez
Anụ ahụ na ọkpụkpụ ga-amaliteghachi ngwa ngwa maka ọgwụgwọ ọhụrụ a
Otu esi ehichapụ akaụntụ email gị niile